तपाइँको USCIS आवेदन शुल्क वित्तिय गर्न सहयोग चाहिन्छ?
यदि तपाईं DACA का लागि आवेदन दिन शुल्क सहयोग खोज्दै हुनुहुन्छ भने, चेक आउट गर्नुहोस् MAF को DACA शुल्क सहायता कार्यक्रम.
DACA शुल्क सहायताको लागि आवेदन दिनुहोस्
तपाइँको USCIS आवेदन शुल्क तिर्न मद्दत गर्न एक 0% ब्याज loanण प्राप्त गर्नुहोस्।
USCIS आवेदन शुल्कको लागि 0% ब्याज Oणहरूमा पहुँच गर्नुहोस्:
- अस्थायी संरक्षित स्थिति (१TP2T495)
- सापेक्षिकको लागि याचिका (१TP2T535)
अध्यागमन राहतका लागि आवेदन दिन महँगो हुन सक्छ। हाम्रो क्रेडिट प्रोग्रामले तपाइँको क्रेडिट निर्माण गर्ने बित्तिकै तपाइँको USCIS आवेदन शुल्क कोष गर्न सस्तो तरिका प्रदान गर्दछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं USCIS मार्फत फाइल गर्न योग्य हुनुहुन्छ। तपाइँको कागजहरू पूरा भयो र MAF को कार्यक्रमको लागि आवेदन दिन अघि पठाउनको लागि तयार छ। चेक आउट गर्नुहोस् Immi.org यदि तपाईंलाई एक नाफारहित वकीलबाट सहयोग आवश्यक छ भने।
एमएएफको forणको लागि अनलाइन आवेदन गर्नुहोस् र वित्तीय शिक्षा पाठ्यक्रमहरू पूरा गर्नुहोस्। तपाईंको आवेदन स्वीकृत भएको एक हप्तामा हामी तपाईंलाई होमल्याण्ड सुरक्षा विभागको अमेरिकी विभागमा पठाउने चेक पठाउनेछौं।
तपाइँको पूरा कागजपत्र र MAF चेक उपयुक्त USCIS फाइलिंग केन्द्रमा पठाउनुहोस्। मासिक भुक्तानी तपाईंको चेक खाताबाट डेबिट गरिनेछ, र यी भुक्तानी सबै तीन प्रमुख क्रेडिट ब्यूरोलाई रिपोर्ट गरिनेछ!
“जब मैले मतदान गरे, यो मेरो लागि मात्र थिएन। यो उनीहरूका लागि हो जसले आफ्नो परिवारको लागि शान्ति र उत्तम जीवन पाउनको लागि यात्रामा अवरोधहरूको सामना गरेका छन्। कुनै राष्ट्रपतिले यो मबाट लिन सक्दैन। "
कार्ला, सान फ्रान्सिस्को, CA
अनलाइन आवेदन भर्नुहोस् र समर्थन कागजात सबमिट गर्नुहोस्
हामी तपाईको होमल्याण्ड सुरक्षा विभागको अमेरिकी विभागमा चेक आउट गर्नेछौं र तपाईंलाई मेल पठाउनेछौं
एकचोटि तपाईंले आफ्नो चेक प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंको आवेदन प्याकेटको साथ चेक उपयुक्त यूएससीआईएस फाइलिंग सेन्टरमा मेल गर्नुहोस्
भुक्तानी तीन प्रमुख क्रेडिट ब्यूरोलाई रिपोर्ट गरियो
हाम्रो कार्यक्रमहरूमा सामेल हुनको लागि, तपाईंले प्रमाणित गर्नु पर्छ कि तपाईं आफ्नो USCIS आवेदन सबमिट गर्न तयार हुनुहुन्छ। यदि तपाईं योग्य हुनुहुन्न भने यदि तपाईं अनिश्चित हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई एक गैर-नाफामुखी कानूनी सेवा प्रदायकसँग परामर्श सिफारिस गर्छौं। आफ्नो क्षेत्रमा एक फेला पार्न, immi.org मा जानुहोस्
म नागरिकता, DACA, ग्रीन कार्ड, आप्रवासी सम्बन्धको लागि याचिका, TPS वा U भिसाका लागि मेरो USCIS आवेदन पेश गर्न तयार छु।
हरियो कार्ड आवश्यकताहरूको समीक्षा गर्नुहोस्